Habakuk 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Odiyifo no su hwehwɛɛ mmoa (1-4)
“O Yehowa, minsu nkosi da bɛn?” (2)
“Adɛn nti na wohwɛ ma nhyɛso kɔ so?” (3)
Onyankopɔn nam Kaldeafo so bebu atɛn (5-11)
Odiyifo no kaa ne haw kyerɛɛ Yehowa (12-17)
‘Me Nyankopɔn, wunwu da’ (12)
‘Woyɛ kronkron dodo sɛ wobɛhwɛ adebɔne’ (13)
1 Atemmusɛm a odiyifo Habakuk* nyaa ho anisoadehu ni: 2 O Yehowa, minsu nkosi da bɛn na woatie me?+ Mensrɛ wo hɔ mmoa nkosi da bɛn ansa na woagye me afi amumɔyɛsɛm mu?+ 3 Adɛn nti na daa woma mihu adebɔne? Adɛn nti na wohwɛ ma nhyɛso kɔ so? Adɛn nti na m’ani tua adesɛe ne amumɔyɛsɛm? Na dɛn nti na ɔham ne ntɔkwaw abu so saa? 4 Eyi nti mmara nyɛ adwuma,Na obiara mmu atɛntrenee. Efisɛ abɔnefo atwa atreneefo ho ahyia,Ɛno nti na wɔkyea atemmu.+ 5 “Monhwɛ amanaman no mu, na monhwɛ nea ebesi! Montɛɛ mo anom nhwɛ na mo ho nnwiriw mo,Efisɛ biribi besi wɔ mo bere so,Na sɛ wɔka kyerɛ mo mpo a, morennye nni.+ 6 Hwɛ, mɛma Kaldeafo aba;+Wɔyɛ ɔman a wɔn tirim yɛ den na wɔn ani so yɛ hyew. Wotwiw fa asaase tɛtrɛɛ soKogye afi a ɛnyɛ wɔn de fa.+ 7 Wɔyɛ ahuabɔbirim, na obiara suro wɔn. Wɔhyehyɛ wɔn ankasa mmara, na wɔn tumi* na ɛyɛ adwuma.+ 8 Wɔn apɔnkɔ ho yɛ hare sen asebɔ,Na wɔn ho yɛ hu sen mpataku a wɔnenam anadwo.+ Wɔn apɔnkɔ de mmirika kitikiti,Na wofi akyirikyiri reba. Wotu fãã te sɛ ɔkɔre a ɔde ahoɔhare rekodidi.+ 9 Wɔn nyinaa de asi wɔn ani so sɛ wobedi amumɔyɛsɛm.+ Sɛ wɔka bom na wɔreba a, wɔn anim te sɛ apuei mframa,+Na wɔkyere nnipa a wɔn dodow te sɛ anwea de wɔn kɔ. 10 Wodi ahemfo ho fɛw,Na wɔserew abirɛmpɔn.+ Wohu abannennen biara a, wɔserew;+Wɔboaboa dɔte ano de yɛ akoban,* na wɔko fa nkurow. 11 Afei wɔkɔ wɔn anim te sɛ mframa, na wotwam fa asaase no so,Nanso wobedi fɔ,+Efisɛ wogye di sɛ wɔn nyame na ɔma wɔn ahoɔden.”*+ 12 O Yehowa, wunni hɔ fi tete anaa?+ O me Nyankopɔn, me Kronkronni, wunwu da.*+ O Yehowa, woayi wɔn sɛ wommebu atɛn;Me Botan,+ woayi wɔn sɛ wɔmfa asotwe* mmra.+ 13 W’aniwa yɛ kronkron dodo sɛ ɛbɛhwɛ adebɔne,Na wuntumi nhwɛ mma amumɔyɛ nkɔ so.+ Ɛnde adɛn na wonka nkontompofo hwee,+Na woyɛ komm ma ɔbɔnefo mene nea ɔteɛ sen no?+ 14 Adɛn nti na woma nnipa yɛ sɛ ɛpo mu mpataa,Ne mmoa a wɔwea a obiara nni wɔn so? 15 Ɔde* darewa yi eyinom nyinaa; Ɔde n’asau twe wɔn,Na ɔboaboa wɔn ano wɔ n’atena mu. Ɛno nti odi ahurusi kɛse.+ 16 Ɛno nti na ɔbɔ afɔre ma n’asauNa ɔbɔ afɔre* ma n’atena,Efisɛ saa nneɛma no na ɛma onya ne ho,*Na onya aduan pa. 17 Enti n’asau no, daa ɔbɛkɔ so abɔ no ma anaa?* Ɔbɛkɔ so ara akunkum amanaman a ahummɔbɔ nnim anaa?+
^ Ebetumi akyerɛ, “Anigye Kɛse a Wɔde Yɛ Atuu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔn tumi ne wɔn nyame.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “yɛrenwu.”
^ Anaa “kasakyerɛ.”
^ Kyerɛ sɛ, atamfo a wɔyɛ Kaldeafo no.
^ Anaa “ɔhyew aduhuam.”
^ Nt., “aduan sɔkyee.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Enti ɔbɛkɔ so atwe ne sekan anaa?”